Deeqaha Waddada Weyn | Destination Medical Center
Deeqaha Waddada Weyn
$3 milyan oo DEED dhiirigelin ah
DMC waxa lagu abaalmariyay $3 milyan iyada oo loo marinayo Waaxda Shaqada iyo Hormarinta Dhaqaalaha ee Minnesota si ay ugu bixiso tabarucaadaha loogu talagalay ganacsiyada hadda ama mustaqbalka ee degmada DMC dhexdeeda ee maalgelinta hormarinta raasumaalka ee qaab dhismeed kasta oo joogto ah ama hanti kale oo lagu daro hanti wax ku kordhinaysa qiimaheeda. waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Dayactirka ama dib u hagaajinta hantida, oo ay ku jiraan balaadhinta iyo ku darida
Burburinta, diyaarinta goobta, iyo dhisitaanka dhismaha (gudaha ama bannaanka dhismaha midkood)
Dhulbixinta,wadabixinta iyo laxiriira boos nadaafinta
Burburinta iyo diyaarinta goobta
Injineereynta, hore u naqshadeynta iyo shaqada naqshada
Waxaan hiigsaneynaa inaan hagaajino adkeysiga dhaqaalaha anagoo:
Dib u soo nooleynta hantida ku taalo degmada DMC ee ay waxyeello ka soo gaartay dhacdooyinkii labadii sano ee la soo dhaafay.
Kor u qaadayna fursadaha ku aadan BIPOC, ruug cadaaga, ama ganacsiyada naafada ah iyo milkiilayaasha hantida.
Abuureyno oo haysaneyno shaqooyin joogto ah.
Awood u siinaya ganacsiyada jira inay xoojiyaan oo ay badiyaan badeecooyinkooda iyo adeegyadooda.
Mudnaanta koowaada waxaa la siin doonaa ganacsiyada iyo hay’adaha matalaya rug caadaga, dadka naafada ah, Madowga, dhaladka ah, ama dadka midabka leh ee mashaaricdooda ay dhisi doonaan hanti, abuurayo shaqooyin, iyo xasilinayo bulshooyinka ku teedsan hareeraha waddooyinka.
Codsadayaashu waa inay xaqiijiyaan 70% kharashka mashruuca
Abaalmarinta ugu badan ee $750,000 mashruuc kasta
Abaalmarin kasta oo tabarucaad ah oo ah $200,000 ama ka badan ayaa looga baahan doonaa inay sameyan waxyaabaha soo socda:
La kulmaan Ganacsiga Bartilmaameedka ah iyo Qorshaha Ka qaybqaadashada Xoogga shaqada – 15% dadka laga tirada badan yahay, 8% haweenka jooga 2022, 7% haweenka ama ganacsiyada ay leeyihiin dadka laga tirada badan yahay
Bixinta mushaarka jira ee loogu talagalay dhismaha
Abaalmarinta kama dambaysta ah in la sameeyo Abriil 2023
Mashruucyada waa in la dhammaystiraa Diseembar 31, 2026
Ka hor inta aadan bilaabin codsigaaga, waxaad u baahan doontaa:
Qiyaasta kharashaadka mashruuca ee ko socda qandaraasle guud ama qandaraasleyaasha kale ee qaban doona shaqada (dacyactirka tubbooyinka, naqshadeynta, iwm.)
Dukumeenti cadeyn ah oo la xaqiijiyey 70% ee kharashka mashruuca – tusaale: warqad ka timid deyn bixiyaha(yaasha); bayaan bangi oo muujinaya cadadka loo baahan yahay; warqad ka socota maalgashtaha; warqadda(daha) abaalmarinta tabarucaadada; isku darka mid kasta oo ka mid ah
Haddii aad uga baahan tahay warqad taageero ah DMC si aad u xaqiijiso 70%, fadlan iimayl u soo dir Chris Schad si aad ugala hadasho mashruucaaga ka hor inta aan la soo gudbin.
Haddii aad u baahan tahay in lagaa caawiyo hagitaanka codsiga, fadlan la xiriir (xiriiriyaha hagaha).
Waxaan u joognaa inaan caawinno
Ma u baahan tahay caawimaad codsiga? Waxaan leenahay ‘navigators’ kuwaas oo u heellan inay caawiyaan ganacsigaaga.
Su’aalaha Inta badan La Isweydiyo ee Barnaamijka Dib u nooleynta Dhagaalaha Wadada Weyn
Waa maxay Barnaamijka Tabarucaada Dib u nooleynta Dhagaalaha Waddada Weyn?
Tani waa hindise ay dowladdu maalgeliso oo loogu talagalay in lagu bixiyo tabarucaada si loogu hormariyo mashaaricda raasumaalka ganacsiga degmooyinka ganacsiga dhexe ee gobolka oo dhan.
Mashruucyada oo u sababa hormarino qaab dhismeed kasta oo waara ama hantida maguuraanka ah kale lagu darey hantida taas oo kudarta qiimaheeda ayaa ah mid sharci ah. Kharashyada ganacsiga hawlgalka maaha kuwa u qalma. Codsadayaashu waa inay sidoo kale haystaan ilo kale oo maalgelin ah si ay u waafaqaan kharash kasta oo uu bixiyo barnaamijkan.
Yaa maamulaya deeqada barnaamijka ee guddaha Rochester?
Tabarucaada waxaa maamula Xarunta Caafimaadka Bar-dhammaadka ee Hay’ada Hormarinta Dhaqaalaha oo ku taal faras-magaalaha Rochester. DMC EDA-da loo codsadey iyo oo heley deeqda abaal marinta oo lasocota taageerida Magaalada Rochester.
Mashaariicda u qalma waa inay ahaadan kuwa ku jiro gudaha xuduudaha Degmada DMC.
Yaa laga yaaba Inuu codsan karo maal gelin?
Shakhsi ama shirkad kasta oo qorsheynaysa inay maalgashato mashaariicda raasumaalka u qalmo ee degmada DMC way codsan kartaa. Mudnaanta waxaa la siin doonaa ganacsiyada iyo hay’adaha matalaya Shirkadaha Ganacsiga ee Liita (DBE), rug caadaga, dadka naafada ah, Madowga, dadka dhaladka ah, ama dadka midabka leh ee mashaaricdooda ay dhisi doonaan hanti, abuurayan shaqooyin, iyo xasilinayan bulshooyinka ku teedsan hareeraha degmooyinka.
Maxay yihiin ururada aan u qalmin maalgelinta tabarucaada?
Ganacsiga wax soo saarka, qaybiya, iibiya ama sameeya hawlo si cad ula xariira qalabka galmada.
Ganacsiga kusocda dakhli aan laga fiirsanin oo aan lahayn hariir hawlgal dhanka hawlaha ganacsiyada.
Ganacsiga hawlihiisa aasaasiga ah diiradda lagu saaray hawlo khatar ganacsi leh oo kobcinaya faa’iidada isbaddelka qiimaha halkii ay ka ahaan lahayd habka ganacsiga caadiga ah.
Ganacsiga sameeya in kabadan nuska dakhliga sannadlaha kayimaada hawlaha deynta.
Ganacsiga gala iibka ahraamka, taas oo niyada kaqeybgalaha aasaasi u ah ay ku tiirsantahay iibka lagusameeyo nambarka kaqeybgalayaasha waligiisa iskordhiya.
Ganacsiga gala hawlaha oo ay mamnuucey sharciga federaalka ama sharciga loo isticmaali karo sharci maxkamad meesha ganacsiga kuyaala ama lagu qabto.
Ganacsiga ku hawlan shirkada qamaarka, ilaa ganacsiga uu ka helo wax ka yar 50% dakhligeeda saafiga ah ee sanadlaha ah ee iibka bakhtiyaanasiibka.
Maalgashigee laga yaaba in lagu maalgeliyo deeqda?
Maalgaliyaasha raasumaalka, sida:
Burburinta, boos diyaarinta,iyo dhisida dhismaha
Injineereynta,dib unaqshadeynta iyo naqshad shaqo
iyo Kaabayaasha dhaqaalaha
Waa maxay ujeedooyinka aasaasiga ah?
Kor u qaadida fursadaha ku aadan BIPOC, ruug cadaaga, ama Shirkadaha Ganacsiga ee Liita, ama ganacsiga naafada ah iyo milkiilayaasha hantida.
Abuurista iyo haysashada shaqooyin joogto ah.
Maalgashiga miyaa loo heli karaa mashruucyasha la dhameystirey mar hore?
Maya. Lacagaha tabarucaada waxa kaliya oo loo heli karaa mashaaricda cusub.
Kawaran hadii mashruuca mar hore aan bilaabey?
Lacagaha tabarucaada looma isticmaali karo shaqada horay u socotay. Sikastaba ha ahaate,maalgashiga waxaa loo ogolyahay shaqo aan wali bilaabanin. Shaqada wali aan laqaban waxay ubaahnaan doonta in lagu qeexo codsigaaga.
Maalgashigee laga yaaba in lagu maalgelinin deeqda?
Sharci ma ahan gadashada booska saxda ah,hadii kale hawlgalka ganacsiga ama qarashaadka ganacsiga socda,sida alaabta, mushaarka,ama raasumaalka shaqeeynaya.
Imisa deeq abaalmarin ayaa leh DMS EDA’s?
DMC EDA waxa ay qaybin doontaa ilaa 3 milyan oo doolar oo tabarucaad ah iyada oo lagu abaalmarinayo ugu yaraan $3,000 iyo ugu badnaan $750,000 abaalmarintiiba. Abaalmarinahan deeqda waxay dabooli karaan ilaa 30% qarashka mashruuca. Maalgalinta soo hartey waa inay ka imaata ilooyin kale.
Tusaale ahaan, mashruuca raasumaalka ah ee $100,000 waxa lagu abaalmarin kara ilaa $30,000 Tabarucaada Maalgelinta Wadada Weyn. Haraaga soo harey waaa in lagu maalgaliyaa ilooyin kale.
Maxaa loo isticmaali karaa maalgashiyaasha is shabaha?
Deemaha,sinnaan, iyo maalgashiga dowlad deegaanka laga keenin wadanka ama kheyraadka federaalka loo isticmaali karo isku ekaashaha.
Goormee codsadayaasha xiiseeya codsan karaan maalgashi?
DMC EDA-ga waxay dooneysa inay bilawdo aqbalitaanka codsiyada waqti aan ka dambayn Maajo 2022. DEED waxey ubaahantahay dhamaan maalgashiyada in lagu abaal mariyo aan ka dambeynin Dis 31, 2024-ta, iyo mashruuca waa in lagu soo gabagabeeya Dis 31, 2026-da.
Yaa bixinaya deeda maalgashiga?
Maalgelinta waxaa bixiya Waaxda Shaqada iyo Hormarinta Dhaqaalaha ee Gobolka Minnesota.
Maxey gobolka Minnesota u bilawdey barnaamijkan?
Barnaamijka tabarucaada waxa loogu talagalay in lagu caawiyo ganacsiga degmooyinka dhexe dib u dhiska bilic ahaan iyo dib u meeleynta iyada oo ay jiraan isbedelo la taaban karo oo dhaqaalaha magaalada hoose.